Guddiga Beeraha ee Golaha Shacabka: Dalagyada Beeruhu waa ay Caafimaad Qabaan – Kalfadhi
Guddiga Beeraha ee Golaha Shacabka: Dalagyada Beeruhu waa ay Caafimaad Qabaan
Dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay daraasad ay dhawaan soo saartay Jaamacad ku taala Waqooyiga Ireland oo ay ku sheegtay in sun laga helay qaar ka mid ah dalagyada ka soo go’a beeraha Soomaaliya.
War-saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Beeraha Soomaaliya ayaa ku tilmaamay dalagyada Soomaaliya kuwo caafimaad qaba oo aan soo saaristooda loo adeegsan Kiimiko sun ah.
Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee dowladda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Saciid Xuseen Ciid, ayaa kulan la qaatay guddiga Beeraha ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka.
Guddiga iyo wasiirka ayaa ka wada hadlay Cilmi baaris la sheegay in ay sameeysay Jaamacada Queen’s University ee dalka Ireland, taas oo sheegtay in qaar kamid ah badarka kasoo gu’a dalka Soomaaliya laga helay sun, taas oo keeni karta in ay dadka cuna ay u dhintaan.
Guddiga iyo wasaaradda ayaa sheegay in aan waxba ka jirin daraasada jaamacada isla markaana ay tahay been-abuur.
“Waxaan guddiga iyo wasaaradu ay isku raceen in kor loo qaado mooralka iyo niyadda dadka ay u hayaan cuntadda wadaniga ah. Dhinaca farsamada iyo xiriirada ay wasaaradu ay hoggaamiso halka dhinaca Baarlamaankuna uu guddigu hogaamiyo ayaan isku raacnay”.
“Annagoo is kaashaneyna ayaan waxaan ka wada howlgalli doonaa in khatartaasi laga hortago meelaha ay ka jirto, dadka sidii loo wacyi gellin lahaa, sidii qalabka keydka loo kordhin lahaa iyo dhinaca kale oo ah in dadka loogu baaqo in ay is-dejiyaan”, ayuu yiri wasiirka.
Cilada la sheegay ma lahan cuntadeena guddigana aad ayuu ula yaabay, waxaana isku raacnay annaga oo isku duuban in aan dhiirigellino cuntadeena ayuu halkiisa sii raaciyay.